यी राशी भएका पु’रुषलाई पाउन यु’वतीहरु किन गर्छन् मरिहत्ते ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/यी राशी भएका पु’रुषलाई पाउन यु’वतीहरु किन गर्छन् मरिहत्ते ?
यी राशी भएका पु’रुषलाई पाउन यु’वतीहरु किन गर्छन् मरिहत्ते ?
ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिको भविष्य जन्मकुण्डी र राशी अनुसार पत्ता लगाउन सकिन्छ । ज्योतिषहरुले नै व्यक्तिको भविष्य कस्तो जीवन साथी असल हुन्छन् भन्ने बारे बताएको हुन्छ । जीवन जीउन जो कोहीको लागि असल साथीको खाँचो पर्छ । सुख दुख साट्ने एउटा मा’ध्यम हो प्रेमी प्रेमीका ।
प्रेमको विषयलाई लिएर केटा मान्छेले भन्दा धेरै केटी मान्छेलो सोच्ने गर्छन् । जबकी यस्ता कुरामा बढी संयमित हुने भनेको पनि केटीहरु नै हुन् । हरेक केटीहरुले आफ्नो जीवन साथीको बारेमा हर समय सोच्ने गर्छन् की धेरै माया गर्ने असल जीवन साथी परोस् । यद्यपी ज्योतिष शास्त्र अनुसार म’हिलाहरु पु’रुषप्रति निकै आकर्षित हुने केही राशीको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । हेरौँ कुन कुन हुन ती राशीहरु ।